Censorship.no!/User Manual (intro/faq) — Burmese @ Hosted Weblate
User Manual (intro/faq)
All strings — 822 words Browse Edit Zen
Approved strings — 822 words Browse Edit Zen
Approved strings with suggestions — 232 words Browse Edit Zen
Strings with suggestions — 232 words Browse Edit Zen
Translated strings with dismissed checks — 772 words Browse Edit Zen
Labeled: User Manual — 781 words Browse Edit Zen
Strings withoutalabel — 41 words Browse Edit Zen
83% 8 272 1,658 100
90%4121 74520 0
94% 1 18 14220 3
Translated using Weblate (Russian) 5d7a8fb
ohai authored3days ago
Sept. 13, 2021, 8:55 a.m.
35 822 5,191
100% 35 100% 822 100% 5,191
2% 1 4% 41 5% 295
17%628% 232 26% 1,387
0 changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes0changes 14 changes0changes 13 changes0changes 63 changes
Censorship.no! / User Manual (intro/faq) — Burmese
To avoid this and enable the use of such dynamic sites in CENO, you can use private tabs (i.e. private browsing), which leave private data intact and keep connections to the sites encrypted and thus protected from everyone else. However, this requires that network traffic from your device can reach those websites in some way.
Burmese 1 character edited Current translation
ဤအဖြစ်ကို ရှောင်ရှားပြီး အပြောင်းအလဲရှိသော ဝဘ်ဆိုက်များကို CENO တွင် အသုံးပြုလိုပါက သီးသန့်တကပ်ဗ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ - သီးသန့်ရှာဖွေခြင်း) ကို အသုံးပြုပါ။ သီးသန့်တက်ဗ်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မထိခိုက်စေဘဲ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ၍ အခြားလူများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော် သင့်စက်မှ ကွန်ရက်အသွားအလာသည် ထိုဝဘ်ဆိုက်များသို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
Short answer: yes, by using private tabs.
အဖြေတို - သီးသန့် တကပ်ဗ်များ သုံး၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Also, since CENO and Ouinet are under continuous development, you may experience some instability. That may also mean that backwards-incompatible changes are introduced which require you to uninstall the application or remove stored data (including bookmarks and site settings) before upgrading.
Burmese0characters edited Current translation
ထို့ပြင် CENO နှင့် Ouinet ကို တီထွင်ဖန်တီးဆဲ ဖြစ်သည့်အတွက် သင်သည် မတည်ငြိမ်မှုအချို့ကို ခံစားရနိုင်သည်။ ယင်းသည် အဆင့်မမြှင့်မီ သင့်အနေနှင့် အက်ပလီကေးရှင်းကို ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် (စာမှတ်များနှင့် ဆိုက်ဆက်တင်များ အပါအဝင်) သိုလှောင်ထားသော ဒေတာကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည့် နောက်ပြန် ကိုက်ညီမှုမရှိသော အပြောင်းအလဲများကို မိတ်ဆက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအဖြစ်ကို ရှောင်ရှားပြီး အပြောင်းအလဲရှိသော ဝဘ်ဆိုက်များကို CENO တွင် အသုံးပြုလိုပါက သီးသန့်တဘက်ဗ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ - သီးသန့်ရှာဖွေခြင်း) ကို အသုံးပြုပါ။ သီးသန့်တက်ဗ်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မထိခိုက်စေဘဲ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ၍ အခြားလူများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော် သင့်စက်မှ ကွန်ရက်အသွားအလာသည် ထိုဝဘ်ဆိုက်များသို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
ဤအဖြစ်ကို ရှောင်ရှားပြီး အပြောင်းအလဲရှိသော ဝဘ်ဆိုက်များကို CENO တွင် အသုံးပြုလိုပါက သီးသန့်တဘ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ - သီးသန့်ရှာဖွေခြင်း) ကို အသုံးပြုပါ။ သီးသန့်တဘက်ဗ်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မထိခိုက်စေဘဲ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ၍ အခြားလူများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော် သင့်စက်မှ ကွန်ရက်အသွားအလာသည် ထိုဝဘ်ဆိုက်များသို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
အဖြေတို - သီးသန့် တက်ဘဗ်များ သုံး၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Short answer: yes, at least for some non-critical browsing.
အဖြေတို - အနည်းဆုံး အရေးမကြီးသော ရှာဖွေမှုအချို့အတွက် အစားထိုးနိုင်သည်။
Mobile connections often make reaching your device more difficult from the outside than Wi-Fi ones, thus decreasing the chances that you can help other users get content.
ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုထက် မိုဘိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွင် ပြင်ပမှ သင့်စက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် ပိုမိုခက်ခဲတတ်သောကြောင့် အခြားအသုံးပြုသူများကို အကြောင်းအရာများရရှိအောင် ကူညီနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ ကျဆင်းစေပါသည်။
CENO consumes an extra amount of data which may result inahigher phone bill (see above).
CENO သည် ဒေတာပမာဏ ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖုန်းဘေလ် ပိုမိုကုန်ကျနိုင်ပါသည် (အပေါ်တွင်ကြည့်ပါ)။
Although CENO should work fine onamobile connection, there are two reasons why we recommend usingaWi-Fi connection instead:
CENO သည် မိုဘိုင်းချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုကို အစားထိုး အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုရသည့် အကြောင်းရင်းနှစ်ခု ရှိပါသည်။